အမျိုးသားချင်း လက်ထပ်သူ လူမှုရေးအဖွဲ့မှ အထုတ်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အမျိုးသားချင်း လက်ထပ်သူ လူမှုရေးအဖွဲ့မှ အထုတ်ခံရ
အမျိုးသားချင်း လက်ထပ်သူ လူမှုရေးအဖွဲ့မှ အထုတ်ခံရ
Posted by parparazi on Apr 29, 2010 in Myanma News, News | 18 comments
ယူရီ ကဲ့သို့သော အမျိုးသားများကို “မိန်းမလျာ” ဟု အများက ခေါ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့ကမူ “လိင်တူချစ်သူ” ဟူသော ဝေါဟာရကို ပိုမို နှစ်သက်သည်ဟု သိရသည်။
အမြင်မကျဉ်းပါနဲ့ဗျာ။ သူများဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဘားမှဆိုင်ပါဘူး။ အရှင်ဘုရားဟောထားသလို ဒီဘဝမှာ သမာတ (samata) လဲလိုအပ်တယ်။
သူ.စိတ်ခံစားချက်က ကျားဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူး။
တူတူချင်းကိုအတူနေချင်တယ်ဆိုတာကိုတော. လူသိရှင်ကြား တရားဝင်လက်ခံဘို.ဆိုတာကတော.
ကျနော်တို.လို. အရှက်နဲ.လူလုပ်တဲ.တိုင်းပြည်မှာ လုံးဝလက်မခံသင်.ဘူး။
ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပေမယ့်ဒီလိုလိင်တူချင်းလက်ထပ်တာကို မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင်ခွင့်ပြုတာမျိုးကိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်
ခုနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မှာ MSM တွေကို အလှပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်ပြီးကတည်းက သူတို့တွေ နည်းနည်း ပေါ်ပေါ် ထင်ထင် နေလာကြတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ အတတ်ပညာတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက် နေသူတွေကို (ဥပမာ- Make-up Artists, Costume Designers) လက်ခံနိုင်စရာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ဘဲ အလကားနေ အလှပြင်ပြီး ယောက်ျားတွေကို လိုက်ညုနေတဲ့ MSM တွေကို မြင်ရတာတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ ယောက်ျားအင်အားကို ထိခိုက်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
be lo pyit tar le yu ri yalllll… Dote Kha nay oyi pauk..
Nyilay to ka htin yar lote Kya..
kaung tal kwar…
ka lay lay says:
သူ့ခမျာ မိန်းမမရတာသေ ချာလို့
သူတို့ ကိုအခွင့်အေ၇းပေးသင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကြောင့် စိတ်ပြောင်းသွားကြသောလူငယ်တွေများလာတာက မကောင်းတဲ့အခြေနေတ၇ပ်ပဲ။ အဲဒါမျိုးလုပ်သူတွေလိင်တူတွေကိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန် အေ၇းယူသင့်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဟော်မုန်းကြောင့် စိတ်ပြောင်းတာထက် မသမာမှုကြောင့် စိတ်ပြောင်းသွား၇တဲ့လူငယ်ပိုများမယ်။ အဲဒါကြောင့် လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေ အနေနဲ့ သူတို့ ကို သတိထားဆက်ဆံ၇မယ်။
အမှန်က ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဂျီးဒေါ်နွားကျောင်းနေကြတာ…
လူတိုင်းမှာ မွေးကတည်းက အားနည်းချက်အားသာချက်ရှိကြစမြဲပါ..
ငါသာ သူ့လိုဆိုရင်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို အားနည်းသူဖက် မတွေးတတ်ကြပဲ အားသာတဲ့ဖက်သာတွေးတတ်ကြတဲ့လူတွေအတွက် အလုပ်တစ်ခုပိုရကြတာပေ့ါ…
အဲဒါပြောတာပေါ့။ကိုယ့်ဟာကို အငြိမ်မထားချင်ပဲ ဆော့ချင်ကြတဲ့ကောင်လေးတွေသတိထား။ ကာမေသု မိစ္ဆာ ရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေပေ့ါ။ဒီကံကိုကျူးလွန်တဲ့သူဟာ နောင်ဘ၀မှာယောက်ကျားမဟုတ်မိန်ူးမ မဟုတ်ဆိုတဲ့အပုန်းဘ၀ကိုလဲရမယ်။ မိန်းမသားစစ်စစ်တွေလိုလဲ လင်ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ယူလို့လဲမရ။လူအများရဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်ထင်ခြင်းကိုလဲခံရ ဆိုတာပေါ့။ အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးပေါ့။
ဟိုမုန်းပြောင်းလို့ အခြောက်ဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ်ပြောပေးသော နုနုရည် ၊အ၀၊ ရေ သေချာလို့လား။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွဲမှားမှုက စတာပါ။
ယောကျာင်္းအချင်းချင်း ကြောက်ရွံ့စိတ် ( ကလေးဘ၀မှာ ကြောက်စိတ်တွေက စဖြစ်တာ၊ မယှဉ်ရဲတော့တာ။ Escapism ဆန်ဆန် )
နောက် လိင်စိတ် ဆိုင်ရာ လွဲမှားတဲ့ အမြင် ( မိန်းမမြင်ရင် စိတ်ပါတတ်တဲ့ ယောကျာင်္းဘ၀ကို မှားတယ် ငရဲကြီးမယ်ထင်ပြီး… လွဲကုန်တာ )
အလှအပကို ဦးစားပေးလွန်းတာ ( ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချောတယ်ထင် ပြီး မှန်ထဲကြည့်ရင်းကနေများလာတော့ ဖင်ခံချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမျိုး)
စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကို သူများကိုပြချင်တာ (သူများကို ဖင်ချွတ်ပြချင်လာတာ )
နည်းနည်းကြီးမှ စော်မကြည် စိတ်ကျ ရောဂါနောက်ဆက်တွဲ ( စော်မရ တော့ လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ရင်း ရှုပ်လာတာရယ် ယုံကြည်မှုကျလာတာရယ် )
ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ လုံးဝန်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီး
ဆရာမနုနုရည်ကကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတော့သူကရော ဘာကြီးလဲ ။
တကယ်တော့လူ့အသိုင်းဝိုင်းမှာ ဒါမျိုးကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ ။
(၁) သူကိုယ်တိုင်လဲ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမယ်
သူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့တချို့သော ၀တ္ထုတွေမှာ စာရိတ္တကို အလေးမထားဘဲရေးတဲ့စာတွေဖတ်ဘူးပါတယ်။
ဟိုး…ကာလတစ်ခုဆီမှာ သာရ မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးဖူးတဲ့ ”နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ မွှေးတယ်ရှင်” ဆိုတဲ့ဝထ္တုတိုလေးဖတ်ဖူးတဲ့သူရှိရင်